जंगली जनावरका कारण खेतबारी बाझै राख्नुपर्ने अवस्था – mero sathi tv
On ६ चैत्र २०७४, मंगलवार ०८:५६
जंगली जनाबरले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली र तरकारी बाली खाएर नष्ट गर्न थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् ।
जंगली जनावरका कारण खेतबारी बाझै राख्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको साफेबगर नगरपालिका–१० घुघुरकोटका स्थानीय कुलराज भट्टले बताउनुभयो । “एक हजारको बथानमा आउने बाँदरको समूहले गहुँबाली खाइसक्यो उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो—“आफूले खान नपाएपछि किन बाँदर र बँदेलको लागि खेती लगाउनु ? दःुख गरेजति उत्पादन हुँदैन त्यसमा पनि जंगली जनाबरले खाएर हैरान पारेको छ ।” सबै काम छोडेर बाँदर भगाउने काममा जुटेका छन् स्थानीयवासी ।
बस्दाखेरी खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? एकपटक अवश्य पढ्नुहोस्